2019 KSD State of Community Input Survey
2019 KSD State of Community Input
Bishii la soo dhaafey, waxaanu wadaagnay laba xaqiiqo iyo warbixino muhiim ah oo ku saabsan gobolka degmada. Nidaamkan Cusub ee Cusub, Waxyaabahaan Cusub Qalabayn Loogu Sameeyey Waxyaabaha Lagu Kala Qayb Galo Ganacsigeena Waxbarashada iyo Barashada Iyadoo la siinayo Warar Cusub oo Dheeraad ah oo ku Saabsan Degmadda si Loogu Soo Dhawaaqo Dukumiintiyo Daabacaad ah oo lagu turjumi karo lana heli karo Fursado kala duwan
Waxaan rajeyneynaa inaad baratay wax cusub oo aad hadda ku qaadato fursad aad ku bixiso talooyin iyo inaad nala soo socodsiiso degmadeena go'aannada muhiimka ah iyo dadaalka muhiimka ah. Ogaanshaha waxa aad u baahan tahay sida bulshadu waxay naga caawineysaa inaan hore u sii wadno.
* 1. Ka dib markaan dib u eego xaaladda xogta degmada, waxaan dareensanahay in KSD ay horumar ka gaartay sidii loo gaari lahaa yoolalka istaraatiijiga ah ee la sheegay.
Si adag u raacsan
Midkoodna waa ku raacsanahay mana diidanayn
Aad baan u diiddanahay
* 2. Waxaan daneyneynaa mudnaantaada kharashka degmada. Xayeysiintu waxay doortaan saddex meelood oo miisaaniyadeed oo aad dareensan tahay in ay mudnaanta koowaad siinayso Dugsiga Degmada Kent.
Tani macnaheedu maaha in KSD ay ka saari doonto maalgelinta meelo aan dooran ama si weyn u maalgelin kuwa la xushay. Macluumaadkani wuxuu kicin doonaa wadahadalka iyadoo KSD ay horumarinayso miisaaniyadda 2019-2020.
Kobcinta Barnaamijyada Gaarka Ah ee Ardayda
Horumarinta Xirfadaha Shaqaalaha
Khayraadka Waxbarashada Dareenka Bulshada (Waxbarasho, Fasal, Qalabka)
Tababarka Sinnaanta ee Shaqaalaha iyo Tabaruceyaasha
Ciyaaraha Ardayda iyo Dhaqdhaqaaqyada
* 3. Waxaan rabaa in aan wax badan ka ogaado ...
Qorshaha maaliyadeed ee muddada dheer KSD
Qaabka Waxbarashada KSD
Taageero loogu talagalay Waxbarashada Ardayda oo dhan
Fursadaha barashada xirfadlayaasha ee shaqaalaha
Koontada KSD ee diiradda la saaro - Waa maxay qorshaha muddada-dheer ee shaqaalaha? ardayda? xubnaha guddiga
Horumarka ardayda iyo waxqabadka
Sidee ayaan uga qayb qaadan karaa
Sida loo noqdo Xubin Guddiga KSD
Fursadaha Shaqada ee KSD
* 4. Isku xirnaanshaha KSD ayaa sida ugu wanaagsan loo qeexay (mid dooran):
Xubinta waalidka / qoyska
Xubinta Bulshada ee Xaafadda
Rasmiga la doortay
Xubinta Bulshada ee Gobolka
* 5. Haddii aad xiiseyneyso inaad u adeegto guddiga bulshada ee KSD oo ah mutadawiciin, fadlan dhiib macluumaadkaaga xiriirka.
* 6. Fadlan qiimee sida aad dareemeyso tayada turjubaanka.
Ma aanan helin sahan la tarjumay.
Tarjumaaddu waxay ahayd mid aad u fiican; Waan fahmi lahaa dhammaan sahanka.
Turjubaanku wuu fiicnaa; Waan fahmi karnaa inta badan sahanka.
Tarjumaaddu waxay ahayd mid wanaagsan; Waan fahmi lahaa qaar ka mid ah sahanka.
Turjumadu waxay ahayd mid cabsi badan; Waan fahmi kari waayay baaritaanka.